Maxay yihiin sababaha ugu waawayn ee kululaynta aduunka | Saadaasha Shabakadda
Sababaha kuleylka adduunka
Qarnigii XNUMXaad waa qarnigii labadoodaba isbedelka cimilada sida kuleylka adduunka noqday laba hanjabaad oo dhab ah meeraha oo dhan. Arinta kululaynta adduunka, el mismo waxaa sababa kordhay heerkulka dhexdhexaadka ah badaha iyo jawiga sababo dabiici ah awgood iyadoo badanaa loo aaneeyo a ficilka aadanaha.
ka saynisyahano iyo khubaro Berrinka, waxay ku qaadatay dhowr iyo toban sano barashada dhacdadan oo waxay isku dayayaan inay saadaaliyaan isbeddelada kuleylkaan wuxuu sababi doonaa dhamaan meeraha dhowr sano gudahood iyo haddii ay weli jirto waqti lagu joojiyo sida waxyeelo xun taas oo ku hanjabaysa inay soo gaabinayso nolosha dabiiciga ah ee Dunida. Ka dib waxaan ka faalloon doonaa si faahfaahsan oo dheeraad ah oo aan kuu caddeeyo, maxay yihiin sababaha kuleylka adduunka iyo cawaaqibka ka dhalan kara muddada dhexe iyo tan fog.
1 Sababaha dabiiciga ah ee kuleylka adduunka
1.1 Waxqabadka cadceedda
1.2 Uumiga biyaha
1.3 Wareegyada Cimilada
2 Sababaha dadku sameeyay ee cimilada sii kululaaneysa
2.1 Kordhinta qiiqa gaaska lagu sii daayo
2.2 Xaalufinta dhirta
2.3 Bacriminta siyaado ah
2.4 Gaaska methane
3 Waa maxay cawaaqibka kuleylka adduunka?
Sababaha dabiiciga ah ee kuleylka adduunka
Sida laga soo xigtay aqlabiyadda aqoonyahannada isbeddelka cimilada, qaar ka mid ah sababaha kuleylka adduunka ee meeraha ayaa laga yaabaa inay sabab u yihiin sababaha dabiiciga ah ama sababaha macmalka ah oo ay sababtay ficil bini aadamku sameeyay. Arinta sababaha dabiiciga ah, ayaa ka qayb qaadanayay kululaynta caalamiga ah ee meeraha kumanaan iyo kumanaan sano. Si kastaba ha noqotee, sababaha noocan ah muhiim maahan inay soo saaraan isbeddelada cimilada in meeraha oo dhami ay maanta dhibaataysan yihiin isla markaana ay khatar weyn ku hayaan dunida oo dhan.
Mid ka mid ah sababaha dabiiciga ah ee kuleylka adduunka ka sii muhiimsan oo saamayn taban ku leh caafimaadka meeraha laftiisa, waxaa u sabab ah koror ballaadhan oo ku yimid waxqabadka qoraxda keenaya wareegyada kululaynta muddada-gaaban. Qorraxdayada marba marka ka dambeysa wey sii weynaaneysaa sidaas darteedna, waxay kaloo soo saartaa shucaac badan oo qorraxda inta lagu guda jiro howlaheeda isku dhafka nukliyeerka Waxaan ognahay in falaadhaha qorraxda ee waxyeelada leh ay leexiyaan lakabka ozone iyo aaladda magnetka ee dhulka. Si kastaba ha noqotee, waxay gacan ka geystaan ​​isbeddelka cimilada, maaddaama qayb ka mid ah shucaacani uu ku sii jiro jawiga ku keydsan qaabka kuleylka wuxuuna kordhiyaa celceliska heerkulka meeraha.
Nooc kale oo ka mid ah sababaha dabiiciga ah ee keenaya ayaa lagu sheegay kuleylka adduunka waa kororka uumiga biyaha jawiga dhexdiisa, taas oo keenta in celceliska heer kulka marba marka ka dambaysa uu kordho isla markaana ka qaybqaata kululaynta lafteeda. Uumiga biyaha waa gaas lagu koriyo oo dabiici ahaan u hayn kara kuleylka. Waxay wax ku biirineysaa saameynta aqalka dhirta lagu koriyo ee dabiiciga ah waana ku mahadsan tahay uumiga biyaha inaan ku noolaan karno heerkulkan wanaagsan ee nolosha.
Dhibaatadu waxay tahay markii bini aadamku wax ka beddelo qaybtan wareegga biyaha oo ay u abuuraan uumiga biyaha badan. Waxaad dhihi kartaa tani waa mid ka mid ah sababaha kuleylka adduunka ee u muuqda mid dabiici ah iyo mid dabiici ah isku mar. Qiyaasta uumiga biyaha hawo-qaadka ah, ayaa sii weynaanaya sii haynta kuleylka.
Sababta saddexaad ee dabiiciga ah ee kululaynta adduunka waxaa ugu wacan waxa loogu yeero wareegyada cimilada kuwaas oo badanaa ka gudba meeraha si joogto ah. Wareegyadan waa inay ahaadaan ilayska qorraxda ee boqorka xiddigta. Sidan, haddii Cadceedda waa isha tamarta taas ayaa wadda cimilada dhulka, waa macquul in shucaaca qoraxda laftiisu uu leeyahay door weyn isbeddelka heerkulka ee meeraha oo dhami ku dhacayaan.
Sababaha dadku sameeyay ee cimilada sii kululaaneysa
In kasta oo sababaha dabiiciga ahi door muhiim ah ka ciyaaraan kululaynta caalamiga ah ee meeraha, iyagu waa sababaha macmalka ah ee kuleylka adduunka kuwa dhibaatada ugu badan ku haya Dunida. Inta badan sababaha dadku sameeyaa waa natiijada kororka loo yaqaan gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo oo uu sababay ficilka nin. Saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo waxaa sababa qiiqa carbon dioxide waana sababta ugu muhiimsan ee maanta keenta diirimaadka adduunka. Qiijinta noocan ahi waxay noqotay a khatar dhab ah iyo hanjabaad nolosha meeraha waana sababta ay khubarada badankood u raadsadaan xal degdeg ah si looga adkaado waxyeelada noocan oo kale ah.
Kordhinta qiiqa gaaska lagu sii daayo
Qiiqa kaarboon laba ogsaydhku waa natiijada gubashada shidaalka shidaalka. IYO waa in gubashadan inteeda badan ay sabab u tahay soo saarista korontada iyo gaaska kuwaas oo maalin walba adeegsada baabuurta waddooyinka adduunka. Markay sannaduhu sii socdaan dadkuna dhulka ku sii kordhayo, inbadan iyo ka badan baa la gubayaa. shidaalka foosha, si taban u saamayn ku leh deegaanka iyo kuleylka adduunka, iyadoo la gaarey waqti markii heerkulku aad buu u sarreeyaa oo dhibaato ba’an ku haysa guud ahaan dadka adduunka.
Waa inaan u fahamno dhaqdhaqaaqa jawiga sidii wax si isdaba joog ah isu bedbeddela sababo la xiriira isku soo ururinta gaasas kala duwan oo ku jira jawiga. Iskusoo wada duuboo, CO2, isku dheelitirka had iyo jeer isku mid ma aha, maadaama ay jiraan nooleyaal badan oo fuliya sawir qaadista una isticmaala gaaskan inay ku noolaadaan.
Waxyaabaha kale ee uu bani’aadamku sababa ee kululaynta adduunka ayaa ah xaalufinta dhirta badan oo kaymaha meeraha ah, taas oo keenaysa kaarboon laba ogsaydh inay ku kacdo jawiga oo dhan. Geeduhu waxay CO2 u beddelaan oksijiin iyada oo loo marayo habka sawir-qaadista oo leh xaalufinta dhirta wuxuu yareynayaa tirada geedaha ee la heli karo si loogu beddelo CO2 oksijiin. Natiijada tan ayaa ka weyn Isku-uruurinta CO2 jawiga, taas oo horseedda kororka kuleylka adduunka iyo sidaas darteed sare u kac heerkulka.
Xaalufinta dhirta ayaa sidoo kale keenta hoos u dhac ku yimaada kala duwanaanshaha noolaha sababo la xiriira kala qaybsanaanta iyo burburka degaannada dabiiciga ah ee noocyo badan. Xawaareynta xaalufinta dhirta ma joogsato waxaana la filayaa in sanadka 2050 in ka badan kala badh kaymaha Amazon ay halakeyn doonaan.
Bacriminta siyaado ah
El isticmaalka bacriminta beeraha waa sababaha ugu muhiimsan ee kororka xad dhaafka ah ee celceliska heerkulka meeraha. Bacrimintaasi waxay ka kooban yihiin heerar sare oo ah xabagta nitrogen, aad uga waxyeello badan kaarboon laba ogsaydhka laftiisa. Markay dadku sii kordhaan oo ay kordhaan, waxaa jira a baahida cuntada oo kordhay, marka waxaa jira koror ku yimaada beeraha la beeray sidaa darteedna, ka weyn isticmaalka bacriminta iyaga dhexdooda.
Soo-saarista iyo keenista cuntada heer caalami ah waxay u baahan tahay goosasho deg deg ah oo u tarjumeysa adeegsi aan kala sooc lahayn oo ah bacriminta, doogga, sunta cayayaanka, fungicides iyo wax kasta oo la xiriira hagaajinta koritaanka iyo horumarinta dalagyada Waa lagama maarmaan in la fikiro waqti dheer lana bilaabo cunitaanka wax soo saarka gudaha oo aan u baahnayn bacriminno badan oo qiiqa gaaska lagu sii daayo inta lagu guda jiro gaadiidka uu aad u yar yahay.
Sababta ugu dambeysa ee dib loogu eegayo kuleylka adduunka waana in lagu xisaabtamo gaaska methane. Gaaska noocan ahi wuxuu leeyahay taxane ah saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo oo aad uga weyn CO2 lafteeda. Methane sidoo kale waxaa lagu soo saaraa iyada oo loo kala baxayo Qashinka qashinka lagu shubo iyo wax kasta oo la xiriira mowduuca digada. Arrinta nafleyda ee burburka iyo maqnaanshaha oksijiinta waxay dhalisaa gaaska methane. Gaaskaani sidoo kale wuxuu kusii kordhayaa feejignaanta isla markaana awoodda keydinta kuleylka waa mid aad u weyn.
Sidaad aragtay oo aad xaqiijisay, iyagu waa sababo badan taas oo sababi karta kuleylka adduunka inuu kordho oo uu khatar galiyo meeraha muddo dhexdhexaad ah. In kasta oo sababaha kululaynta caalamiga ee dabiiciga ah leeyihiin dhacdooyinkooda Kulaylka noocan oo kale ah, waa sababaha dadku sameeyay si loo xaliyo waqtiga ugu yar.
Maalmo ka hor waxaa suuragal noqotay in la caddeeyo in sanadka 2015 uu ahaa ugu kulul taariikhda dhammaan meeraha oo dhan. Xaqiiqadan runta walaaca leh oo ay weheliso soo noqnoqoshada dhacdooyinka cimilada daran duufaannada, duufaannada ama duufaannada waa inay ka saaraan wacyiga inta badan bulshada adduunka in xal loo raadiyo sida ugu dhakhsaha badan.
Iyaga oo wajahaya xaaladdan jilicsan, ayay dawladaha awoodaha waaweyn ee adduunka waa inuu si dhakhso leh wax uga qabtaa oo u joojiyaa isbedelka cimilada iyo kululaynta aduunka in meeraha oo dhami ay dhibtoonaan maalin kasta.
Waa maxay saamaynta kuleylka adduunka?
Waa maxay cawaaqibka kuleylka adduunka?
Cawaaqibka kororka heerkulka dhulku wuxuu saameeyaa adduunka oo dhan ilaa xad ama ka yar. Tusaale ahaan:
Dalka Spain, hirarka kulaylku waxay noqonayaan kuwo soo noqnoqda, muddo dheer socda oo xoog leh. Adiga oo aan aad ugu fogaan, 14 -kii Ogosto, 2021, magaalada Cordovan ee Montoro waxay ku garaacday ugu badnaan taariikheed, 47,2ºC, intii lagu jiray dhacdada mawjadda kulaylka oo socotay dhowr maalmood.
Sare u kaca heerka badda ayaa nagu qasbi doona inaan beddelno koorsada meelo badan. Tusaale ahaan, xeebaha waa la waayi karaa, iyadoo aan la xusin halista ay u keeni doonto dhammaan kuwa ku nool xeebta.
Nidaamyada deegaanka ayaa is beddeli doona. Dhab ahaantii tani waa wax la arkayo: dhirta oo adkaysi u leh kulaylka iyo abaaraha ayaa beddelaya kuwa yar.
Baraf -barafku wuu dhalaalaa, oo gacan ka geysta kor u kaca heerka badda.
Xayawaanku si dhakhso ah ayay u bakhtiyaan. In kasta oo aan halkan uga hadli karno sidoo kale ugaadhsiga, haddana waxaa jira xayawaanno badan, sida orsoolaha dabaysha, oo aad ugu sii adkaada inay qabsadaan ugaadhsigooda, maadaama barafku dhalaalay waqtigiisii ​​ka hor.
Cuntadu waxay noqon kartaa mid qaali ah. Dhirtu waxay ku xiran tahay cimilada si ay u koraan iyo sidoo kale inay soo saaraan midhahooda, si haddii xaaladuhu isu beddelaan, ay u sii adkaan doonto helitaanka khudaarta, badarka iyo / ama khudaarta.
Sida aad arki karto, kulaylka caalamiga ahi waa dhibaato aad u daran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Sababaha kuleylka adduunka
38 faallooyin, ka tag taada
Sheegashada Mashruuca Isku-dheelitirka Miisaaniyadda iyo Xakamaynta Hawada
Qoraa Rolando Escudero Vidal
Waxaan u maleynayaa in la joogo waqtigii laga hadli lahaa arrimaha 'Pneumoponics'. Si kedis ah ayaamahaygii waa tirsameen. Ma doonayo in marka ay siigada uun ku dhacdo dabaysha, aan ka qoomamoon doono in aanan sheegin, anigoo arkaya bina-aadamnimada oo la silcaya cawaaqib xumada cimilada adduunka. Hubaal, qaar baa oran doona waxaan idhi doqon. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu sheego waxa uu u malaynayo. Laakiin, waxay noqon laheyd mid xiiso leh haddii ay i tusaan inaan dhahayo doqon. Hadday sidaas tahay, si lama filaan ah, waxaan ku ogaadaa wax igu kalifaya inaan dhaho waxyaabo doqon ah. Kadib xitaa waan ku mahadsanaa. Laakiin, in caddayntu ay macquul tahay, inay leedahay saldhigyo dhab ah.
Waa maxay oof wareenku? Pneumoponics waa hab, nidaam ka kooban quudinta dhirta, taas oo ah, khudaarta, oo hawo ku leh asalka. Waxaa sidoo kale loogu yeeri karaa hal-abuur. Kaas oo loo oggolaaday INDECOPI, dhammaadka 2014. Waa nidaam si cad u muujinaya in khudaarta ay quudiyaan oo keliya xididka iyo in caleemaha ay u adeegaan oo keliya inay ka saaraan gaasaska ka soo baxa gudaha warshadda, iyadoo ay sabab u tahay howlaha kiimikada ee ka dhaca gudaha iyaga. Mid ka mid ah gaasaskaas, uguna badan, waa oksijiin. Habkani, oo lagu dabaqay jaangooyooyin waaweyn, wuxuu si fudud u xallin karaa diirimaadka adduunka. Iyo, maahan oo kaliya xalinta dhibaatada, laakiin sidoo kale waxay ka caawin kartaa nin inuu xakameeyo jawiga, horumarinta beeraha, iwm. Maaddaama khudaartu cunto ahaan u isticmaasho noocyo badan oo gaas ah. Waxaa laga yaabaa in dhammaan noocyada gaaska ee jawiga ku jira.
Hal-abuurkani muxuu ku saleysan yahay? Hal-abuurnimadani waxay ku saleysan tahay Aragtida 'Radicular Theory', oo looga hadlayo buugga cinwaankiisu yahay Mashruuca Dib-u-Celinta iyo Xakamaynta Is-waafajinta Cimilada, oo uu qoray Rolando Escudero Vidal. Aragtidani waxay ku dhisan tahay xaqiiqooyin iyo waxyaabo badan oo laga arki karo dabeecadda. Aragtidani waxay sheegaysaa in khudaarta la quudiyaa oo keliya xididka. In caleemaha ay u adeegaan oo kaliya in ay soo saaraan gaasaska ay soo saaraan howlaha kiimikada ee ka dhaca gudaha.
Laakiin ujeeddada aasaasiga ah ee mashruucani waa in lagu xalliyo dhibaatooyinka cimilada ee saameeya aadanaha. Sababtaas awgeed, maalmaha ugu horreeya ee Maarso, waxaa loo ogeysiiyay Gobolka Peru, iyadoo gaarsiinaysa mugga soo koobista La Neumoponia Aqalka Dowladda, iyadoo ka wakiil ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda. Muga magaca Wasiirka wasaaradaha soo socda: Wasaaradda Deegaanka, Wasaaradda Beeraha, Wasaaradda Dhaqaalaha, Wasaaradda Arrimaha Dibadda, iwm. Sidoo kale Shirweynaha Jamhuuriyadda, oo ku hadlaya magaca Madaxweynaha Koongaraska, Mrs. Ana María Solórzano, oo, sida uu sheegayo La Primera, ay u roonayd inay ku faallooto arrintan. Waxaa sidoo kale mug la gaarsiiyey Jaamacadda Agrarian.
Ku jawaab Rolando Escudero Vidal
Maxaase ka dhalan kara kululaynta adduunka? Qaar badan oo aad u daran. Waa in lagu xisaabtamo in waxyaabo badan oo kaarboon laba ogsaydh ahi ku ururayaan jawiga. Gaaskani wuxuu leeyahay kaarboon. Kaarboonku waxay uruursataa kuleylka waxayna u gudbisaa hareeraheeda, marka laga hadlayo jawiga waa dhulka. Marka shay kululaado wuu balaaraa markuu weynaadana wuu daciifa. Xaaladdan oo kale, qolofka dhulka ayaa kululaanaya. Sidaa darteed way sii ballaaraysaa. Haddayna sii ballaadhinayso, way daciifaysaa.
Natiijada ka soo baxda nidaamkan waa dildilaaca ka muuqda meelo badan. Meelahaas midkood waa gacaliyahayga Callejón de Conchucos. Dhacdooyinka saameeya magaalada Piscobamba, Socosbamba iwm. Xalka kaliyana, nasiib daro, waa in meesha laga tago. Mid kale ma jiro. Hagaag, suurtagal, meelahan waxay leeyihiin hal sano oo ay ku noolaadaan.
Waan ku raacsanahay, tani waxay noqon kartaa tallaabada xigta ee hydroponics iyo aeroponics, oo xilligan aad loogu guuleysto hababka wax soo saarka beeraha. Shakhsiyan, waxaan aaminsanahay in bini aadamku uu mar hore xaqiiqsaday waxyeelada ay tahay in "la hagaajiyo" isagoo raadinaya waxyaabo kale oo cusub, adoon ilaawin in dhirtu ay tahay bilowga wax soo saarka tamarta ee biosphere.
mahadsanid waana is arki doonaa dhawaan
Ku jawaab francisco Garcia
Waxaa jira sababo badan oo keena cimilada adduunka. Dhibaatooyin badan oo ka dhashay kuleylka adduunka, dad badan ayaa u dhiman kara, cirifyada ayaa dhalaalaya, daadad badan ayaa dhici kara taas awgeed, dadku uma maleynayaan waxa dhici kara.
Jawaab José María
Dadku maahan inaysan fakarin laakiin muhiimad weyn ma siinayaan waxa dhici kara marka ay musiibo dhacdo Alle ha xifdiyee waxay uun ogaanayaan waxa aan muhimadda siineyn meeraha.
Jawaab enrique jr
haha taasi waa run.
Ka jawaab casaan
Nitrogen iyo oksijiin ku jira hawada marka lala xiriiro sagxadaha aadka u kulul (TUSAALAHA AIRCRAFT ENGINES), waxaa loo beddelaa oksaydh oksaydh ah, kaas oo ka falceliya qaybta loo yaqaan 'ozone', iyadoo la adeegsanayo falka shucaaca dhererka dhererkiisu ka yar yahay 0,31 micrometer-ka, taasoo horseedeysa xaalufinta lakabka ozone.
Maxay tahay sababta aan weligood loo xusin malaayiin duulimaadyo sanadle ah? Mr lacag waa mudane awood badan !.
dadku waa doqonimo in markasta oo daad uu jiro daadadka aduunka awgeed waxaan dhihi karaa waan ka qoomameynayaa
Waa salaaman tahay Lalo.
Waxa hubaal ah in ay tahay dhibaato goor dhow ama goor dambe aakhirkeeda ku dhammaan doonta innaga oo dhan. Haddii aan runtii la qaadin tallaabooyin wax ku ool ah si looga fogaado, dabcan.
Arrinta kuleylka adduunka, inbadan oo naga mid ah ayaa ka walaacsan maadaama ay jiraan arrimo cawaaqib xumo leh oo saameeya jawiga, sikastaba waxba uma qabanno, waxaa muhiim ah in bulshada, hay'adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn, ganacsatada, xarumaha waxbarashada iyo qof kasta oo doonaya inuu joojiyo ama yareeyo dhibaatooyinkaas. in aan wajaheyno, aan bilowno ololeyaal kor u qaadaya wacyiga ku saabsan daryeelka iyo ilaalinta deegaanka sidaasna looga fogaado cudurrada faafa, cudurada iyo jiritaanka beddelka kaarboon laba ogsaydhka.
Ku jawaab Agustín Chávez
Waxaan kula talinayaa dokumenteriga COWSPIRACY inuu furo dood xiiso leh oo ku saabsan mowduucan, maxaa yeelay sida ku cad dokumenteriga, sababta ugu weyn ee kululaynta adduunka waa masuuliyadda xoolaha gaar ahaan, taas oo la xiriirta wax aan ka yarayn habka aan wax u cunno. Sababtuna waa fududahay: cunista hilibka waxay ubaahantahay adeegsi balaaran iyo hadaad fiiriso meherada makhaayada, keenida hilibka ficil ahaan waa wadar. Tani waa wax aanan si buuxda uga warqabin, oo aan wax ku darsan karno, BADAN AADANKU badankood waxay ku qasbanaan doonaan inay isbedel ku sameeyaan caadooyinkooda isticmaalka iyagoo u isticmaalaya wax jilicsan sida cuntada, oo ka mid ah noocyada raaxada ugu weyn. Falanqaynta mawduuca, ka baxsan milicsiga aadka u daran ee dokumenteriga ah ee aan sheegayo, macno ayey samaynaysaa iyada oo aan wax badan laga fikirin. Waa mawduuc xasaasi ah oo aan la taaban, maadaama sida muuqata madaxda warshadaha xoolaha ay saameyn weyn ku leeyihiin dhinacyada siyaasada aduunka oo dhan, waa dokumentar adag oo aan raaxo laheyn, waxaana jeclaan laheyn inaysan laheyn aasaas, laakiin si kooban, wuxuu kashifay in arrinta kuleylka adduunka ay tahay inay si toos ah ula xiriirto baahida loo qabo isbeddel ku yimaada mid kasta oo ka mid ah dadka ku nool adduunka, iyadoo isbeddel lagu sameynayo dabeecadda ma ahan oo keliya dusha sare ee laakiin waxaa la sameynayaa naxariis weyn xagga wax kasta oo aan ku wareegsan. Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay oo aan rajeyneyno inaan tan ku xaqiijin karno waqtiga. Kama sii wadi karno inaan ku jees jeesno veganism sababtoo ah qaar ayaa dagaal iyo dhibsasho leh, waa inaan tixgelinno xulashooyinka dabiiciga ah inay yihiin hab ixtiraam leh oo loogu noolaado adduunyada oo wax walba na siisay. Waa waqtigii wax la siin lahaa. Salaan.
Sidoo kale waa in lagu xisaabtamo in mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee xaalufinta dhirta ay tahay, marka lagu daro xoolaha, beero ay ku taageeraan kumanaan dad ah. Oo weliba waa inaad tixgelisaa bacriminta.
Dadku waa kuwa ugu horeeya ee lagu eedeeyo wasakheynta deegaanka, sababtaas awgeed waa mid aad u kulul, jawiga ayaa burbursan waana annaga oo burburinay markaan tusno keymaha, waxaan jareynaa geedaha, qiiq badan ayaa saameyn nagu leh, iwm.
Ku jawaab cristhian
Dhammaan geeddi-socodka fasaxa dabeecadda ayaa weli ah, waxa ay tahay inaad sameyso ayaa siinaya jihada saxda ah ee hadhaagaas
Raadinta dambiilayaasha ma xallinayso dhibaato, laakiin halkii, adeegsiga habka ku habboon.
Waxay yiraahdaan ma ogin waxa aan heysano ilaa aan ka aragno inuu lumay, sidaa darteed waxay dhici doontaa markii wasakheynta ay ka badato meeraha, tiknoolajiyad fara badan ayaa la isticmaali doonaa haddii aan nafteena u hurno dhulkeenna oo aan la beddeli karin in ka badan dhammaan lacagaha iyo tikniyoolajiyadda ALLE inaga tagay meera caafimaad leh sida jidhkeenna oo kale haddii aynaan daryeelin jidhkeenna oo innaguna aan nafteenna u horseedno cudurro aan laga soo kaban karin qaabkeenna wax loo cuno waa inaynu xikmad badan ka haysannaa sidaan ugu dhaqmayno nolosha waxaan hore u ognahay inaanay ahayn inaynu qashin iska daadinno waa inaynaan webiyaasheenna nijaasayn iyo badaha iyo xitaa sidaa darteed waxaan u sameynaa hamiga lacagta laakiin qof walba waa ogyahay sida ay u dhaqmayaan waana inaan kaliya sameynaa qeybteena taas oo ah inaan sameyno waxa saxda ah
Jawaabta jorge ventura
Dhibaato kasta waa la xallin karaa.
xalli, laakiin dib ugama noqon
actisal by rl Atisal dijo
Dhulka waxaa isu beddelaya taxaddar la'aan weyn iyo aqoon la'aan in la ilaaliyo xilliyada, u nuglaanta la'aanta looga hortagayo xumaanta nidaamka cirka, waa inaad kor u eegtaa kor si aad u aragto falcelinnada ka hooseeya, dhammaantood u fiirsada, fiiriya kor iyo kor iyo kor si aad u aragto inbadan iyo ka badan oo hoosta ah
Ka jawaab ficilka laga bilaabo rl Atisal
Sidee CO2 u jajabiyaa
Way cadahay in CO2 uu jajabiyo marka dhuxusha la kululeeyo. Tilmaamayaasha cad ee xaqiiqadani waa laba dhacdo oo ku dhaca dabeecadda: marka guga yimaado roobab fudud ayaa da'a. Markay xagaagu timaado ama tagto, roobabku way sii kordhaan, waxayna da'ayaan roobab culus. Waa maxay sababta tan? Waxa dhacaya ayaa ah in guga falaaraha qorraxda ay wali ku jiraan meel aysan weli aad u kululeyn karin. Dhanka kale, xagaaga fallaadhahaasi waxay toos ugu yimaadaan jawiga oo aad bay u kululaadaan. Tani waxay caddeyn u tahay in CO2 uu ku daadsamo kuleylka, soo deynta oksijiinta. Kadib oksijiinku wuxuu ku biiraa haydarojiin, oo ku badan jawiga, sameynta biyo, H2O. Ka dibna roob.
Huaycoloro waa meel ku taal gobolka Huarochirí. Haddii magaceedu ka yimaaddo laba magac oo Kech-huas ah: huay-ghó iyo loj-ro, waa meel halisteeda leh. Huay-ghó waa nooc aad u yar oo dhuuban oo abeeso ah, oo dhererkiisu yahay 30 sentimitir, dhumucdiisuna ka yar tahay 4 milimitir. Dhaqdhaqaaqiisu waa mid dhulka ku sii yaraanaya. Waxay ku nooshahay dhulka hoostiisa. Waxaa loo kala qaadi karaa laba oo labada dhinacba wali way nool yihiin. Mid walboo jidkiisa ayuu marayaa oo wuxuu hoos marayaa dhulka ay ku noolyihiin.
Huayco waxay ka timid magaca abeesadan, sidaa darteed, hantidiisa waxay aad ugu egtahay kuwa abeesooyinka yaryar. Maxaa yeelay dadkii hore ee deganaa meelahan ayaa meel ugu magac daray wixii ay indha indheeyeen. Huaycoskuna waxay ku dhaqaaqaan hab aan caadi ahayn, sida abeesooyinka yaryar, oo haddii ay kala qaybsamaan waxay sii wadaan wareega.
Iyo waxa dhaha "baqbaqaaq" waa astaamo ka mid ah magaca "loj-ro" oo ah magaca Kech-hua ee cunto u eg maraq, laakiin dhumuc weyn, isku dar ah waxyaabo badan: khudaarta, baradhada, digirta, hilibka, iwm. . Huayco markay gaarto meel lagu joojin karo waxay isu ururisaa samaynta wax lamid ah cuntada aan soo sheegnay. Halkaas laga bilaabo magaca Huaycoloro.
juan jahair dijo
Haddii falaadhaha 'violet violet' ay dhaafaan waan gubi doonnaa illaa aan ka dhimanno
Ku jawaab juan jhair
Sida murugada leh sanado yar kadib waanu u dhiman doonaa gubitaan, hadaanan waxba qaban waa inaan dadka ka wacyi galino joojinta isticmaalka warshadaha. Isku day inaad ka caawiso deegaanka Fadlan sxb, aan isku dayno inaan joojino tan inta ay goori goor tahay. bini'aadamka Fadlan caawi 🙁
Jawaab Gino Gallo
waa inaad tan iska ilaalisaa
Sababaha keena kuleylka adduunka ayaa badan kara. Laakiin waxaa jira qaab lagu xallin karo dhibaatada; Mashruuca Dib-u-Celinta iyo Xakamaynta Mawduuca Hawada ama Pneumoponics.
donis sebastian herrera medina dijo
Nolosha meeraha ayaa ah mid aad u qurux badan haddii aan waxyeelayno ka hor intaanay mustaqbalka carruurtoodu iman, adduunkee ayay fursad uga tagayaan, ma noqon karto hey, dhammaanteen, si aan uga hortagno miinada, hay, waxaan nahay dad, ma nihin xoolo, aan daryeelo adduunka xitaa xayawaanku way daryeelaan
Ku jawaab donais sebastian herrera medina
Heer sare… ..
in dadku joojiyaan beenta oo ay dhagaystaan ​​cilmiga.
Ku jawaab Lucía Paredes
Sababta ugu weyn ee kululaynta adduunka waa xoolaha, gaasaska methane-ka ee lo'da ka dhasha, oo ay wataan stiercol iyo hawo-qaadasho, ayaa wasakheysa wax ka badan dhammaan CO2-ka ay soo saaraan aadanaha oo dhan, xaalufinta weyn ee lagama maarmaanka u ah daaqa u baahan meel iyo ilo aad u badan, wax yar soo saar ...
Ma rabtaa inaad gacan ka geysato kahortagga kuleylka adduunka? Ha cunin hilib.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad daawato dokumentariyada cows-ka ee sifiican loogu sharaxay
Jawaab Moisés Ugido Cedeño
In ka badan faallo bixin, waxaan rabaa inaan sameeyo weydiin. Marka laga soo tago sababaha ku qoran inay asal ahaan ka soo jeedaan kululaynta adduunka, suurta gal ma tahay inaan galno meerto cimilo oo aynaan tixraacyo taariikheed u lahayn? Waxaan ula jeedaa dhaqdhaqaaqa hadda jira ee dhulka, oo leh wareeg soconaya ilaa 25.000 oo sano dabcan, muddadiisa awgeed, tixraacna kama lihin haba yaraatee, saadaasha hawada. Wixii aan maqlay, waxaan kudhowaad nahay 12.000 oo sano xilligii barafka iyo si kadis ah, waxay qiyaastii u dhigantaa muddada wareegga nuska ee bandhigga. Ma noqon kartaa inaan ku sii jeedno xilli aanan tixraac lahayn? Isbarbar yaac, waa isku xirnaan in laga fekero, iyadoo la ogyahay in wareegga Dunida ee qorraxdu dhab ahaantii tahay ellipse, soo bandhigiddu waxay dhalinaysaa isbeddel ku yimaada masaafada u dhaxaysa ujeeddada xusbigaas iyo sidaas darteed wax ka beddelkeeda iyo inay ka muuqato, in kasta oo laakiin aan qayb ahaan ahayn, isbedelada cimilada ee la arkay?
Ku jawaab Alberto Compagnucci
Hagaag, tani wax badan ayey i caawisay, waad mahadsan tahay, laakiin waxaa jira cilmi baaris sheegeysa in kululaynta adduunku tahay sheeko mala awaal ah oo tanna ay horay u dhacday 3 jeer, marka waxa aan raadinayo waa haddii tani run tahay?
Ku jawaab diego saavedra gonzalez
Sideen ugu isticmaali karaa macluumaadkan shaqadayda ama qoraalkeyga haddii uusan jirin qoraa ama ugu yaraan hal jaamacad oo taageerta aqoonta la wadaago, tani waxay igu careysiineysaa bogagga shabakadda, meeye tixraacyada ama boggaga dadka baaritaanka ama shaqada goobta ka waday, wadarta khayaanada.
Ku jawaab Nimco
Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan badbaadino adduunka anaga oo joojinayna waxaas oo dhan
Maaha wax sax ah, waxaan ku qori lahaa qaabka liistada maxaa yeelay waa wax badan, oo kaliya sababo aad u xun, waligaa ha soo gelin degelkan, igama adeegin haba yaraatee
Jawaab Alex Gonzales Herrera
Camila Bear dijo
Waxay ila tahay inay ku dhacday iyada oo aan lagu qorin ogeysiiska in mid ka mid ah dambiilayaasha ugu weyn ay tahay warshadaha xoolaha, oo sababa gaasaska ugu badan ee lagu koriyo, marka laga reebo gubida shidaalka. Gaasaska ay soo saaraan xayawaannada xooluhu waa kuwa sababa gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo oo haddii aynu ku darno xaalufinta si loo beero cunno loogu naaxiyo xoolaha, saamaynta kululaynta adduunku way tarmaysaa.
Jawaab Camila Osa